Pennsylvania WIC | JPMA, Inc.
Ku soo iibso eWIC
Wac rugtaada WIC haddii ...
Waxaad qabtaa su'aalo ku saabsan cuntooyinka WIC ama xaddi ahaan.
Aadan awoodin inaad iibsato cunto aad u maleyneyso inay WIC ogolaatay.
Kaarkaagu wuu lumayaa, la xaday, ama dhaawacmay.
Waxyaabaha Muhiimka Ah Ee Kaarkaaga
U keen kaarkaaga eWIC si aad u hesho ballan kasta oo WIC ah. Haddii aad illowdo kaarkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad ku soo noqoto rugta caafimaadka si aad gargaar u hesho.
Kaarkaaga ku xafid meel ammaan ah oo nadiif ah.
HA BILAABINin PIN khadkaaga ama boorsadaada.
Ha siin PIN-kaaga qof kasta oo aadan rabin inaad isticmaasho kaarkaaga.
HA QAYBIN Kaadhkaaga ama ha xoqin warqadda kaarkaaga.
HA KA QAADIN Kaadhkaaga si qorraxda tooska ah, sida gawaarida gaariga.
WAA MAXAY PIN (LAMBAR AQOONSI)?
Tani waa lambar afar lambar oo qarsoodi ah oo aad isticmaali doonto kaarkaaga eWIC si aad u hesho faa'iidooyinka cuntada.
Markaad dooratid PIN, dooro afar lambar oo fudud oo aad xasuusato balse aad u adag tahay qof kale inuu ogaado (tusaale ahaan, dhalashada ilmahaaga ama waalidka dhalashadiisa). Ha isticmaalin lambar isku mid ah, sida 1111, ama taxanaha tirooyinka, sida 1234, PIN-kaaga.
Ha siin PIN-kaaga cid kale oo aan ahayn Wakiilka WIC ee kuu tababaran. Haddii qof uu yaqaan PIN-kaaga oo isticmaalaya kaarkaaga si uu u helo gargaarkaaga cuntada adigoon fasax lagaa haysan, faa'iidooyinkaas lama beddeli doono.
WAA MAXAY HADDII AAD KA QAADAY PIN PIN?
Ha isku dayin inaad ka fikirto lambarkaaga PIN. Haddii PIN-ka saxda ah ee aan la galin todobaadkii isku-dayga isku-dayga ah, PIN-gaaga ayaa la xiri doonaa, oo waxaad u baahan doontaa inaad ku noqoto kiliinikadaada si aad dib ugu noqotid PIN-kaaga. Tani waxaa loo sameeyaa sidii looga ilaalin lahaa qof kugula talinaya PIN iyo adigoo isticmaalaya faa'iidooyinka cuntada.
MAXAA DHACAYAA HADDII HELI KARO PIN PIN?
U soo celi kiliinikada caddaynta aqoonsiga oo aad dib u dejin kartid.
MAXAAN SAMEYAA HADDII HADDII QOF KALE OO KA BIXIYAA?
Haddii qof uu leeyahay PIN-gaaga oo aan haysanin, isla markiiba wac kilinigaaga.
GOORMA KA HELI KARAA FAA'IIDOOYINKA?
Waxaad isticmaali kartaa dheefahaaga bisha ee ugu dhaqsiyaha badan marka aad ka baxdo xarunta caafimaadka. Macaashka mustaqbalka waxaa la heli karaa bilowga bisha ugu horeysa ee 12: 01am. Dheefaha bishii ayaa ku dhacaya 11: 59pm maalinta ugu dambaysa ee bisha.
SIDEE AYAAN U BAAHAN TAHAY IN AAD HESHIIS KU QABO?
Rasiidhada ka soo iibsata kastaa waxay muujinaysaa miisaanka loogu talagalay bisha soo socota. Haddii aadan haysan risiidhka, waxaad ku noqon kartaa xarunta caafimaadka ama waxaad weydiisan kartaa dukaanka inuu kuugu qoro dheelitir.
WAA MAXAY HADDII AAD KAADI KARTAA?
La xiriir kilinikadaada.
MAXAAN U BAAHAN KARAA KAADIHMI KARTAA FAA'IIDOOYINKA AAD HELI KARO?
SAVE kaarkaaga EWIC! Faa'iidooyinkaaga soo socda waxaa lagu iibsan doonaa isla eWIC kaarka.
WAA MAXAY HADDII AAD KAADI KARTAA AMA CIYAAR?
Isla markiiba la xiriir kilinigaaga. Waxaad ka heli kartaa kaarka beddelaadda shan (5) maalmood kaddib marka kaarka la soo sheego lumay ama la xado.
Gadashada Kaarkaaga EWIC
Cuntada lagu iibsado kaarkaaga eWIC-ka waa in lagu daraa dheelitirka macaashka WIC.
Ka hor inta aan la cunin wax cunto ah, u sheeg qofka dukaanka ah ee aad isticmaasho kaarka eWIC.
Kaadhkaaga kaarka wax ku dhaji oo akhri tilmaamaha. Nidaamka ayaa ku weydiin doona inaad geliso lambarkaaga PIN.
Qofka dukaanka ah wuxuu baarayaa alaab si uu u xaqiijiyo inay yihiin WIC oo la ansixiyey waxaana lagu darey faa'idooyinka qoyskaaga.
Waa inaad dib u eegtaa oo aad aqbashaa waxa aad rabto in aad iibsato ka hor intaysan iibku gaarin. Dakhliga kaashka ah waa inuu dib u eegaa rasiidka isticmaalka ka hor inta aanad ansixin iibsiga.
Cuntada aad iibsato waxaa lagaaga saari doonaa kaarkaaga eWIC waxaadna heli doontaa risiitka dheelitirka faa'iidada oo muujinaya waxa ku haray.
Had iyo jeer hayso rasiidka macaashka macaashka. Waxay muujinaysaa cuntada qoyskaaga ee aad heli kartid iyo maalinta ugu dambeysa inaad isticmaasho manfacyadaada hadda.